ထို့အပြင် အပ်ချုပ်စက်များ၊ အကောင်းဆုံးနှင့် ခံနိုင်ရည်မရှိသော ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အတူ
အပ်ချုပ်လောကက လူတွေကို ပိုပိုပြီးဆွဲဆောင်တယ်။ အဝတ်အစားအချို့ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းများကို အသေးစိပ်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည် အမြဲယုံကြည်လက်ခံနိုင်သော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် နေ့တိုင်း သူတို့ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့ သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ ပထမဆုံး အပ်ချုပ်စက်. တခြားသူတွေက နည်းနည်းပိုသွားဖို့လိုပြီး အဲဒါအတွက် သူတို့လိုအပ်ချက်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမယ့် စက်ကိုလည်း လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကို သင်ရှာဖွေလိုပါက ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောသမျှအားလုံးကို လက်လွတ်မခံပါနှင့်။ စတင်သူများအတွက် အသက်သာဆုံးနှင့် အလွယ်ဆုံး အပ်ချုပ်စက်များမှ၊ နေ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအရှိဆုံး၊ ၎င်းတို့ထဲမှ မည်သည့်အရာကို သင်ရွေးချယ်မည်နည်း။
သင်ရှာနေခဲ့လျှင် အပ်ချုပ်စက် စတင်ရန်အောက်တွင်၊ စတင်သူများအတွက် သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသောအလုပ်များအတွက် စံပြမော်ဒယ်လေးခုကို သင်တွေ့ရပါမည်။
ပုံစံ ဇာတ်ကောင် စြေး
အဆိုတော် ကတိ ၁၄၁၂
- ချုပ်ရိုးအရှည်နှင့် အနံ- ချိန်ညှိနိုင်သည်။
- အလိုအလျောက်ခလုတ်ပေါက် ၄-ဆင့်
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- ကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်း၊ အားဖြည့်ချုပ်ရိုးများ၊ zig-zag 133,24 €
ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါမှတ်ချက် - ၄.၅ / ၅
အဆိုတော် ၂၂၆၃ ရိုးရာ
- ချုပ်ရိုးအရှည်နှင့် အကျယ်-4နှင့်5မီလီမီတာအထိ အသီးသီး ချိန်ညှိနိုင်သည်။
- အလိုအလျောက်ခလုတ်ပေါက် ၄ လှမ်း
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- ဖြောင့်ခြင်းနှင့် zig-zag ချုပ်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဖိထားသောခြေထောက် 137,75 €
- ချုပ်ရိုးအရှည်နှင့် အကျယ်-5မီလီမီတာအထိ ချိန်ညှိနိုင်သည်။
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- LED၊ ချိန်ညှိနိုင်သောခြေ၊ သတ္တုစပွန်ဆာ၊ 189,99 €
- အလိုအလျောက်ခလုတ်ပေါက် ၅ ခု၊ အဆင့် ၁
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- patchwork နှင့် quilting အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များ 171,31 €
အပေါ်က ဇယားမှာ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း လက်မလွှတ်နိုင်ပါဘူး။ Lidl အပ်ချုပ်စက်စူပါမားကတ်စတော့တွင် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရရှိနိုင်သော်လည်း၊ စတင်အသုံးပြုနိုင်သည့် အံ့ဖွယ်မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။
စားပွဲပေါ်ရှိ မည်သည့်မော်ဒယ်များနှင့်မဆို သင်အဆင်ပြေလိမ့်မည်၊ သို့သော် ၎င်းတို့တစ်ခုစီအကြောင်း အနည်းငယ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အပ်ချုပ်စက်တစ်ခုစီ၏ အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည် ။ အပ်ချုပ်လောကတွင် စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများ သို့မဟုတ် အရည်အသွေးကောင်း ဈေးနှုန်းသက်သာသော ရွေးချယ်မှုကို ရှာဖွေနေသူများအတွက်
သင်စတင်ရန် အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များပါရှိသော အခြေခံအပ်ချုပ်စက်ကို သင်ရှာနေပါက၊ အဆိုတော်အပ်ချုပ်စက် ကတိတော် ၁၄၁၂ သည် သင့်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင် ချည်နှောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဇစ်ဆွဲခြင်းကဲ့သို့သော ပိုမိုလွယ်ကူသောအလုပ်များခလုတ်များအပြင် သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် စျေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းသော စက်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုရတာ ရိုးရှင်းပြီး ငါတို့ပြောသလိုပဲ မင်းအခုမှစလုပ်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ၎င်းတွင် မတူညီသော ချုပ်ရိုး ၁၂ ခုပါရှိသော်လည်း အလှဆင်ပွဲများကို ပေါင်းထည့်ရပါမည်။
၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် အများအားဖြင့် ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ 115 ယူရို နှင့်လုပ်နိုင်သည် မင်းရဲ့ဒီမှာဖြစ်ပါစေ။.
အဆိုတော် 2250 ရိုးရာ-...
ဒါဟာတစျဦးဖွစျသညျ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး အပ်ချုပ်စက်များဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်အလက်တစ်ခု ရှိပြီးသားပါ။ အပ်ချုပ်လောကတွင် စတင်လုပ်ကိုင်သောအခါတွင် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာအပြင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါတင်မကဘဲ စုစုပေါင်း ချုပ်ရိုး (၁၀) ချက်ပါရှိတဲ့အတွက်၊ သင့်မှာ အခြေခံတွေရှိပြီးသားဆိုရင် ပြီးပြည့်စုံသွားမှာပါ။ ဒီတော့ မင်းတို. ၎င်းသည် အပေါ့ပါးဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် သင့်လိုအပ်ချက်အရ သယ်ယူနိုင်ပါသည်။
စတင်ရန် ဤအပ်ချုပ်စက်၏ စျေးနှုန်းမှာ ခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည်။ 138 ယူရို y မင်းဒီမှာဝယ်လို့ရတယ်
အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစက်များမှာ Alfa Style 40 ဖြစ်သည်။ အပ်ချုပ်ခြင်းသဘောတရားမရှိသူတိုင်းအတွက် အလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့် အရာအားလုံးထက်ပိုပါသည်။ နောက်ထပ်ဘာတွေလဲ၊ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အဆင့်4ဆင့်ရှိ ခလုတ်ပေါက်၊ အလိုအလျောက်ချည်မျှင်ကဲ့သို့ ပြီးပြည့်စုံပါသည်။. ၎င်းတွင် LED မီးအပြင် ချည်ဖြတ်ရန် ဓါးတစ်ခုလည်း ပါရှိသည်။ ချုပ်ရိုး ၁၂ ချက်အပြင် အလှဆင်ထားသော ဂုံးကောင်နှစ်ကောင်ရှိကြောင်း သတိပြုပါ။ အသုံးအများဆုံးအလုပ်တွေအတွက် အခြေခံကဘာလဲ။
ဤကိစ္စတွင်၊ စျေးနှုန်းသည် ယူရို ၁၈၀ ခန့်အထိ မြင့်တက်လာသည်။ ဒီမှာဝယ်ပါ
အစ်ကို CS10 စက်...
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးချင်ရင် ပထမ အီလက်ထရွန်းနစ်အပ်ချုပ်စက်ဒါက မင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး မော်ဒယ် ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုရတာ ရှုပ်ထွေးပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ အခြေခံအကျဆုံး ချုပ်ရိုးများအပြင်၊ သင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် သင်၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းများကို စတင်နိုင်သည်။ စပ်ချုပ်ပညာ အပြင် quilting ။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်၊ ချုပ်ရိုးတစ်ခုစီ၏ အလျားနှင့် အနံတို့ကို ရွေးချယ်ခြင်းကဲ့သို့ ရိုးရှင်းပါသည်။
ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိလာတဲ့အခါ ပြီးပြည့်စုံမှုရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် နည်းနည်းပိုပြီးတော့ ဝေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးက စျေးနှုန်းလောက်ပါပဲ။ 165 ယူရို. ကြိုက်ရင် ရပါတယ်။ ဒီမှာဝယ်ပါ.
နောက်ထပ်မော်ဒယ်တွေကြည့်ချင်ရင် အစ်ကို အပ်ချုပ်စက်တွေငါတို့ထားခဲ့တဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သင်ရှာနေသည့်အရာသည် အားလုံး၏စျေးအသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါက သင့်တွင်ရှိသည်။ အသက်သာဆုံး အပ်ချုပ်စက်များ ငွေကုန်ကြေးကျများသော မော်ဒယ်အချို့ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ရွေးချယ်ထားသော်လည်း၊
- ချုပ်ရိုးအရှည်နှင့် အနံ- ချိန်ညှိ၍မရပါ။
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- အပ်နှစ်ထပ် 115,36 €
- ချုပ်ရိုးအရှည်နှင့် အနံ- အတိုင်းအတာ ၂ ခု
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- အလိုအလျောက်အကွေ့အကောက်များ၊ အလင်း၊ အခမဲ့လက်တံ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။
အဆိုတော် ရိုးရိုး ၃၂၃၂
- အလိုအလျောက် ခလုတ်ပေါက် ၁ ကြိမ်
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- အလင်း၊ အခမဲ့လက်မောင်း၊ အလိုအလျောက်ချည်ကြိုး 179,99 €
- အလိုအလျောက်ခလုတ်ပေါက် ၁ လှမ်း
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ threading လွယ်ကူခြင်း။ 232,99 €
Jata MC695 စက်...
ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးအသက်သာဆုံး အပ်ချုပ်စက်များထဲမှ တစ်ခုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ Jata MC695 တွင် ချုပ်ရိုးအမျိုးအစား စုစုပေါင်း 13 ခုရှိသည်။ အရမ်းပါတယ်။ သယ်ယူသည့်အခါတွင် အသုံးပြုရအလွန်ရိုးရှင်းပြီး ပေါ့ပါးသောစက်ဖြစ်သည်။. ၎င်းတွင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပြင် ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်များစွာပါရှိသည်။ စတင်သူများအတွက်သာမက တစ်ခုခုကို ပိုလိုချင်နေသူများအတွက်လည်း အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ မကောင်းသောအချက်မှာ ချုပ်ရိုး၏ အလျားနှင့် အနံကို ချိန်ညှိ၍မရပါ။
၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး သင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ 113 ယူရို. မင်းသူ့ကိုလိုချင်လား။ ဒီမှာဝယ်ပါ
၎င်းသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပ်ချုပ်စက်သည် အပ်ချုပ်စက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေတိုအတွင်း တစ်ခုခုလိုအပ်နေသူများအတွက်လည်း အပ်ချုပ်စက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သဘောထားအမြင်များက သဘောတူကြသည်။ ဒီတော့ နည်းနည်းပိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရင် ဒါက မင်းရဲ့ပုံစံပါ။ ၎င်းတွင် အလျားနှင့် အနံ ထိန်းညှိပေးသည့် ချုပ်ရိုး ၂၁ ချက်ပါရှိသည်။ နောက်ထပ်ဘာတွေလဲ၊ တစ်မိနစ်လျှင် ၇၅၀ ချုပ်ပေးပါမည်။လွတ်လပ်သောလက်တံနှင့် ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်။
ဤကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ငွေတန်ဖိုးကြီးစွာဖြင့် လောင်းကြေးထပ်ကာ ၎င်းသည် ယခင်မော်ဒယ်နှစ်ခုကဲ့သို့ စျေးမကြီးသော်လည်း၊ Singer Simple သည် သင့်အတွက် ယူရို 158 နှင့် သင်ရရှိနိုင်သည့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော entry model တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမှာဝယ်ပါ
ALFA လာမည့် 40+ နွေဦး...
အရည်အသွေးမြင့် အပ်ချုပ်စက်များထဲမှ နောက်တစ်မျိုးမှာ ဤစက်ဖြစ်သည်။ ဗားရှင်းအသစ် Alpha အပ်ချုပ်စက် နောက်တစ်ခု။ ဤအကွာအဝေးတွင် အလားတူလက္ခဏာများရှိသည့် မော်ဒယ်များစွာရှိသည်။ သို့သော် ဤကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Alfa Next 45 နှင့် ကျန်တော့သည် ။ စတင်လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံး အပ်ချုပ်စက်ကို ကြာရှည်ခံလိုသူများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ချုပ်ရိုး ၂၅ စင်းနှင့် အလှဆင်ထားသော ဂုံးကောင် ၄ ကောင်သူတို့က မင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပြည့်မီလိမ့်မယ်။
Alfa Next 45 သည် ဈေးနှုန်း သက်သာသော မော်ဒယ် ဖြစ်သည်။ 225 ယူရိုန်းကျင် ပြီးတော့မင်းဘာလုပ်နိုင်လဲ ဒီမှာဝယ်ပါ ၎င်းတို့၏ရရှိနိုင်မှုမှာ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာဖြစ်သောကြောင့် သင်ဝယ်သောအခါတွင် စတော့ခ်မရှိပါက၊ ၎င်းတို့သည် အင်္ဂါရပ်များနှင့် အလွန်ဆင်တူသောကြောင့် ၎င်းတို့၏မော်ဒယ်များကို Next မိသားစုမှ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Toyota SPB15 - စက်...
နောက်ထပ်စျေးအသက်သာဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ ဒါပါပဲ။ ဟိ တိုယိုတာ အပ်ချုပ်စက် SPB ၁၅ ၎င်းသည် ရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျစ်လျစ်သော၊ ရိုးရှင်းပြီး ချုပ်ရိုးအမျိုးအစား ၁၅ မျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ အလှဆင် အမျိုးအစား ၄ ခု၊ ချည်သား ချုပ်ရိုးအပြင် zig-zag တို့ကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ ၎င်းတွင် အလွန်အသုံးဝင်သော recoil lever လည်းရှိသည်။
Toyota SPB15 အပ်ချုပ်စက်၏စျေးနှုန်းသည် ယူရို ၁၁၂ သာရှိသည်။ ဒီမှာဝယ်ပါ.
မင်းရှာနေတဲ့ဟာက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပ်ချုပ်စက်အောက်တွင်၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်များကို ရှာဖွေနေသူများအတွက် အပြည့်စုံဆုံး မော်ဒယ်အချို့ကို သင့်အား အောက်တွင် ပေးထားပါသည်။
Bernett Sew&Go ၈
-၇ မျက်ကွင်း ၁ လှမ်း
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- ဂွမ်းစောင်၊ Patchwork၊ 15 အပ်ရာထူးများ 349,99 €
အဆိုတော် Curvy 8770
-၆ မျက်ကွင်း ၁ လုံး
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- အက္ခရာပုံစံများ၊ Smart Threading ဈေးနှုန်း မရရှိနိုင်ပါ။
အဆိုတော် Starlet 6699
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- 12 အပ်ရာထူးများ၊ သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံ 279,99 €
အဆိုတော် Quantum Stylist 9960
- အခြားအင်္ဂါရပ်များ- LED မီးလုံး ၂ လုံး၊ အပ် ၂၆ ချောင်း 749,00 €
- မျက်ကွင်း ၇ ကွင်း၊
အခြားအင်္ဂါရပ်များ- LCD မျက်နှာပြင်၊ နှစ်ချက်အမြင့်ဖိသည့်ခြေထောက် 649,00 €
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အပ်ချုပ်စက်တွေအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ ပိုကြီးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေအကြောင်း ပြောနေပြီဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ နောက်ထပ် အင်္ဂါရပ်များ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ် အလုပ်ကို ပြီးအောင်လုပ်ပါ။. ဤကိစ္စတွင်၊ Bernett Sew&Go 8 သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စုစုပေါင်း ချုပ်ရိုး 197 စင်းဖြင့် ထားခဲ့သည်။ အဲဒီထဲက 58 ခု အလှဆင်ထားတယ်။ စုစုပေါင်း 15 အပ်ရာထူးများနှင့် presser foot ၏အမြင့်နှစ်ဆကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်။ အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး လွတ်လပ်သောလက်တံရှိသည်။
ဒီ Professional အပ်ချုပ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်းက 399 ယူရို ပြီးတော့မင်းလုပ်နိုင်တယ် ဒီမှာဝယ်ပါ
အဆိုတော် Curvy 8770 -...
သံသယမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများကို ရင်ဆိုင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုရှေ့တွင် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကို အမြဲပြသသည်။ ဒါဆိုရင်, စုစုပေါင်း ချုပ်ရိုး ၂၂၅ စင်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။. အဲဒါကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ စိတ်ကူးတွေကို ပျံသန်းနိုင်ပါစေ။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် ချိန်ညှိနိုင်သော ချုပ်ရိုးအလျားနှင့် အနံနှင့် အလိုအလျောက် အကွေ့အကောက်စနစ်ဖြင့် ပုံစံများပါရှိသည်။ အပ်နှစ်ထပ်နှင့် ခလုတ်ပေါက် ခုနစ်ခု... ကျွန်ုပ်တို့ ဘာထပ်တောင်းနိုင်မည်နည်း။
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ Singer Curvy ကို ဝယ်လို့ရပါတယ်။ aquí။
စုစုပေါင်း ချုပ်ရိုး ၁၀၀ နဲ့ စတင်နေပါပြီ။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိတိုင်း တိုးတက်နိုင်စေမည့် အခြားစက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသော အတွေးအမြင်ကို ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အလျားနှင့် အနံကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတွင်ရှိကြောင်း ဖော်ပြသင့်သည်။ အပ် ၁၂ ချောင်းအပြင် လက်မောင်းနှင့် LED မီးလွတ်များ. အထူဆုံးအထည်တွေတောင် ခံနိုင်ရည်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
၎င်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အပ်ချုပ်စက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Singer Starlet 6699 သည် သင့်အတွက်သာဖြစ်နိုင်သည်။ 295 ယူရို။ မင်းဒါကိုအလိုရှိလား ဒီမှာဝယ်ပါ။
အဆိုတော် Quantum Stylist...
သေချာပါတယ်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အပ်ချုပ်စက်တွေအကြောင်းပြောရင် Singer Quantum Stylist 9960 ကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ သံသယမရှိဘဲ၊ မင်းစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်စေမယ့် အရာတစ်ခုပါပဲ။ ၎င်းတွင်ချုပ်ရိုးအမျိုးအစား 600 ပါရှိပြီး၎င်း၏အရှည်နှင့်အနံကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ ပြောနိုင်တယ်။ စျေးကွက်တွင်သြဇာအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။.
စျေးနှုန်းက 699 ယူရို ဒါပေမယ့် အပြန်အလှန်အနေနဲ့ စျေးကွက်မှာ အကောင်းဆုံး အပ်ချုပ်စက်တွေထဲက တစ်ခုကို ရရှိပြီး သင်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ။
Alfa Model 2160 စက်...
အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူသော LCD မျက်နှာပြင်ပါရှိသော ပြီးပြည့်စုံသောလက္ခဏာများရှိသော Alfa စက်မော်ဒယ်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွင်ချန်ထားသည်။ ဖြစ်လည်းဖြစ်မည်။ ပိုထူသောအထည်များအတွက်သင့်လျော်သည်။ထို့ကြောင့် သင်သည် မတူညီသောအလုပ်များကို စံပြရလဒ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အလိုအလျောက်အပ်ချည်ကိရိယာအပြင် ချုပ်ရိုး ၆၀ နှင့် ခလုတ်ပေါက် ခုနစ်ခု။
ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပ်ချုပ်စက်ရဲ့စျေးနှုန်းက 518 ယူရိုဖြစ်ပြီး သင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒီမှာဝယ်ပါ
ငါ့ရဲ့ ပထမဆုံး အပ်ချုပ်စက်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ ပထမဆုံး အပ်ချုပ်စက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် လွယ်ကူသော အလုပ်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကောင်းမွန်သော၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသော စက်တစ်လုံးကို ကောင်းစွာ ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည် ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ထင်မြင်ကြသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီ့အပြင်၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အခြားအသေးစိတ်အချက်လေးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
အထပ်ထပ်ဆုံးမေးခွန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အခြေခံအကျဆုံးအလုပ်များအတွက်သာ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ပိုမိုကျွမ်းကျင်သောစက်တစ်လုံးအတွက် အများကြီးသုံးစွဲရန်မထိုက်တန်ပါ။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ဝက်ကို သင်အသုံးမပြုသောကြောင့် မည်သည့်အရာထက်မဆို ပိုများသည်။ ကဲ စက်ချုပ်လောကကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်၊ အခြေခံအကျဆုံး စက်ကို မဝယ်ပါနဲ့။. အကောင်းဆုံးအချက်မှာ ၎င်းသည် အလယ်အလတ်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတွင် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါရှိပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အနည်းငယ်ရှေ့ဆက်ရန် ခွင့်ပြုပေးသည်။ မဟုတ်ပါက အချိန်တိုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက် အနည်းငယ် ခေတ်နောက်ကျသွားပါမည်။
အစပိုင်းမှာ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမှန်းမသိရင် စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီမှာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ချုပ်ရန်သင်ယူ အရမ်းရိုးရှင်းပြီး ရှင်းပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ ပထမဆုံး အပ်ချုပ်စက်တွင် မည်သည့်အင်္ဂါရပ်များ ရှိသင့်သနည်း။
ချုပ်ရိုးအမျိုးအစားများ: ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ချုပ်ရိုးချုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံအလုပ်များအတွက် အနည်းငယ်သောစက်သည် ပြီးပြည့်စုံမည်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါက ချုပ်ရိုးအရှိဆုံးကို ရွေးချယ်ပါ။ ပိုထူတဲ့အထည်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ချုပ်ရိုးအရှည်က အရေးကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် ချုပ်ရိုးပိုရှည်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ချုပ်ရိုး အစရှိတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ချုပ်ရိုးရဲ့ အကျယ်က အရေးကြီးပါတယ်။ elastic bands သို့မဟုတ် overcasting ထားပါ။.
မျက်ကွင်း: သူတို့ကြားက ကွာခြားချက် အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဆင့်လေးဆင့်နဲ့ ခလုတ်ပေါက်တစ်ခုလုပ်တာက တစ်ခုလုပ်တာနဲ့မတူပါဘူး။ ဤအသေးစိတ်အချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အထည်များတွင် ခလုတ်ပေါက်များကို အမျိုးမျိုးပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် သတိပြုရမည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။
ဆေးထိုးအပ်ရာထူးများ: အပ်ချုပ်စက်တွင် ရာထူးများလေလေ၊ အပ်ချုပ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်သောအခါတွင် ရွေးချယ်စရာများ ပိုများလေဖြစ်သည်။
စက်အမှတ်တံဆိပ်: ယေဘူယျအားဖြင့်၊ လူသိများသော အမှတ်တံဆိပ်များတွင် သင်၏ယုံကြည်မှုကို အမြဲထားရှိခြင်းက ပိုကောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးကောင်းများအတွက် ပေးဆောင်ရကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့် အရာအားလုံးထက် ပိုပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအပြင် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော ကွဲပြားခြားနားသော အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
စွမ်းအား: 75W ထက်နည်းသော ပါဝါရှိသော စက်များသည် ထူထဲသောအထည်များကို ချုပ်လုပ်ရန် မသင့်လျော်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
အပ်ချုပ်စက်တစ်ခုတွင် အားသာချက်များစွာရှိသည်ကို သတိပြုပါ။ အဓိက တစ်ချက်က အဝတ်အစားအတွက် ယူရိုငွေ အနည်းငယ် သက်သာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။. ကလေးများသည် အသစ်သောအဝတ်အစားများ သို့မဟုတ် စတိုးဆိုင်သို့သွားသည့်အခါတွင် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့်အရာတစ်ခုကို ရှာမတွေ့သည့်အခါ သင်စိတ်ပျက်နေမှာ သေချာပါသည်။ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး စိတ်အားထက်သန်မှုအနည်းငယ်ဖြင့် ဤအရာအားလုံးကို ယခုသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အတိအကျ:
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မျက်ဝါးထင်ထင် မဖြစ်ပါစေနဲ့ အပ်ချုပ်စက်ဟောင်းတွေ ၎င်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောကြောင့် ယနေ့ခေတ်တွင် ၎င်းတို့ကို အခြားအရာများထက် အလှဆင်ပစ္စည်းအဖြစ် ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ ဘတ်ဂျက်က သင့်အတွက် ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်၊ သင်အမြဲတမ်း ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယလက်ချုပ်စက်များ.
အိမ်တွင်း အပ်ချုပ်စက် နှင့် စက်မှု အပ်ချုပ်စက်
သငျသညျအဓိကသိလား အိမ်တွင်း အပ်ချုပ်စက်နှင့် လုပ်ငန်းသုံး အပ်ချုပ်စက်ကြား ကွာခြားချက်သူ့ကို သံသယမရှိဘဲ၊ ၎င်းသည် နှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုကို မ၀ယ်မီ သင်သိထားသင့်သည့် အခြားအသေးစိတ်အချက်များဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာ သိထားသင့်တဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။
၎င်း၏အမည်ကိုညွှန်ပြသည့်အတိုင်း အိမ်တွင်း အပ်ချုပ်စက်သည် အသုံးအများဆုံး အလုပ်များအတွက် အခြေခံ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည်။. ၎င်းတို့အနက်မှ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိထားသည့် အပ်ချုပ်လုပ်ငန်းကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ အဝတ်အစားအချို့ကို ပြုပြင်ပါ၊ မျက်ရည်များ၊ ချုပ်ရိုးများ သို့မဟုတ် ဇစ်များကို ချုပ်ပါ။
၎င်းတို့သည် အပြင်းထန်ဆုံးအလုပ်များအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ တချို့က အာမခံကြတယ်။ ပိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်နှင့်အများကြီးပိုခံနိုင်ရည်ရှိသောချုပ်ရိုးနှင့်အတူ. ကူရှင် သို့မဟုတ် ကြိုးများသည် ဤစက်အမျိုးအစားအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်။ သူမ၏အပေါင်းအဖော်များတွင် မတွေးဝံ့စရာတစ်ခု။ ဒါတွေအားလုံးအပြင် ဒီလိုစက်မျိုးလိုချင်ရင် နေ့တိုင်းအလုပ်ကောင်းကောင်းရပြီး အပ်ချုပ်လောကမှာ အတွေ့အကြုံထက် ပိုနေပြီလို့ပဲ ဆိုရမှာပေါ့။ ၎င်းတို့သည် စက်ရုံတွင်သာမက အိမ်အတွက်ပါ အထည်အမြောက်အမြားဖြင့် လုပ်ကိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
သူတို့က တစ်မိနစ်ကို ချုပ်ရိုး ၁,၀၀၀ နဲ့ ၁,၅၀၀ ကြား အမြန်နှုန်းကို ပေးတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါမှာလည်း အနည်းအကျဉ်းတော့ ရှိပါတယ်။ သမားရိုးကျစက်တွေထက် စွမ်းအင်ပိုသုံးစွဲပြီး အခြားစက်တွေထက် ဆူညံသံပိုထွက်နိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အပ်ချုပ်စက်ဝယ်နိုင်သည့် နေရာများစွာရှိသည်။ တဖက်မှာလည်း ရှိတယ်။ ကုန်တိုက်များ၊ ဟိုက်ပါမားကတ်များအပြင် စတိုးဆိုင်များ အိမ်အတွက် အခြားထုတ်ကုန်များကိုလည်း သင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။ ဒါအပြင်၊ သင့်မှာ စက်တွေရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ တရားဝင်အမှတ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို နာရီတွေ မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်၊ အွန်လိုင်းရောင်းချမှုဟာ အထူးရွေးချယ်စရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ Amazon ကဲ့သို့ စာမျက်နှာများ သူတို့မှာ မော်ဒယ်တွေ အားလုံးရှိတယ်။၎င်းအပြင် ၎င်း၏ ကောင်းစွာအသေးစိတ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းများပါရှိသည်။ တကယ်တော့၊ သင်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ယူရိုအနည်းငယ် သက်သာနိုင်သည်။
အပ်ချုပ်စက်အားလုံးတွင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အများအပြားပါရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကမော်ဒယ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အပိုပစ္စည်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်ယူမှု၏ အခြေခံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါတွေဝယ်ဖို့ ကြုံလာတဲ့အခါ ကြည့်လိုက်တော့ သင့်စက်၏သတ်မှတ်ချက်များ. အဲဒီမှာ သူတို့က သင်လိုအပ်တဲ့ သီးခြားအမျိုးအစား ဒါမှမဟုတ် universal တွေကို ပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုရင် ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုက ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။ အပ်ချုပ်စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အဖြစ်အများဆုံး
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော ကြိုးများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် မည်သည့်အခါမျှ မလုံလောက်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သတိရလာမည့် နောက်ထပ်မူရင်းရွေးချယ်မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍အရောင်များ လိုအပ်ပါသည်။ ရှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း သတိရပါ။ polyester ချည်အပြင်ပန်းထိုး. သင်စက်ကိုဝယ်သည့်စတိုးဆိုင်တွင်၊ ၎င်းတို့ကို သင့်စိတ်ကြိုက်ရလိမ့်မည်။
စက်များစွာရှိပြီးသားဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ၎င်းတို့အား ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် သင်သည် ချုပ်ရိုးအမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့မရှိရင် မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဖိအားခြေဖဝါး သို့မဟုတ် ချည်မျှင်များသည် အခြေခံဖြစ်ပါက အပ်များကော မည်သို့နည်း။ အချို့က ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ဖြင့်လာသော်လည်း အချို့မှာ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ ဒါကြောင့် လက်ထဲမှာ အမြဲရှိတယ်။ ဆေးထိုးအပ်ပေါင်းများစွာ. ရွေးချယ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောအထည်များအတွက်ဆေးထိုးအပ် နှင့်အရည်အသွေးကောင်း။
ဘောပင်တွေနဲ့အတူ အိတ်တစ်လုံးရှာတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါမှ မင်းဘယ်တော့မှ လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ 12 သို့မဟုတ် 15 လောက်ရှိရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲဒါကို မှတ်ထားပါ။
အကယ်၍ သင်သည် ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို တစ်ဦးချင်း မပိုင်ဆိုင်ချင်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက၊ ထုပ်ပိုးခြင်းဟုခေါ်သော အထုပ်ကို အမြဲဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အဲဒီ့အပြင် မရှိမဖြစ် အလိုအပ်ဆုံးကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အချို့ကတ်ကြေး ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များနှင့်ကိုက်ညီရန် မတူညီသော မော်ဒယ်များ။ တိုင်းတာရန် ဖြတ်စက်များနှင့် တိပ်ခွေများကိုလည်း လက်လွတ်မခံသင့်ပါ။
«» တွင် မှတ်ချက် 23 ခု
31:2018 pm မှာဇူလိုင်လ 6, 34 တွင်
အစ်ကို cs10၊ အစ်ကို fs40၊ အဆိုတော် 6699၊ alfa comoakt 500 ကြားမှာ ဆိုင်းငံ့နေတယ်
31:2018 pm မှာဇူလိုင်လ 6, 35 တွင်
1:2018 pm မှာသြဂုတ်လ 9, 35
ငွေတန်ဖိုးအတွက်၊ Singer Scarlet 6699 သည် အနိုင်ရရှိသူဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အပြည့်စုံဆုံးကို လိုချင်ပါက Compakt 500E Plus ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် များစွာမြင့်မားသည်။
2:2019 pm မှာဇန်နဝါရီလ 1, 43
မင်္ဂလာပါ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ!!
ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးချင်ပါတယ်၊ ကျွန်မမှာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဖက်ရှင်နဲ့ ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ ၈ နှစ်အရွယ်သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ဒါက သူ့ရဲ့မွေးရာပါလာတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ၊ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ဝါသနာပါဘဲ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ lidl အပ်ချုပ်စက်ကို ယူရို 8 လောက် ပိုပေးတယ် ဒါမှမဟုတ် ယောက်ျားလေးတွေ ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူး၊ ပြဿနာက အဲဒါက နောက်ဆုံးစက်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အသေးစိတ်ကြောင့် ဝယ်ဖို့ မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော် ပိုက်ဆံအများကြီးသုံးချင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Canary Islands မှာနေထိုင်ပြီး အရာအားလုံးက ပိုနှေးကွေးသွားတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ ရှာရခက်စေမယ့် တစ်ခုခုကို မ၀ယ်ချင်တော့ဘူး။ တစ်သက်လုံးသိဖူးတဲ့ အဆိုတော်၊ အိမ်မှာ အမြဲရှိနေတယ်၊ ​​အရည်အသွေးနဲ့ စျေးနှုန်းအရ ကောင်းတဲ့ တစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်၊ အဆိုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြံပေးချင်တာကတော့ ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ တိုးတက်နေချိန်တွင် အချိန်အတော်ကြာအောင် သင်ယူရန်နှင့် အချိန်ကြာကြာ အသုံးပြုစေလိုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ကို ကူညီပြီး အကြံပြုနိုင်ပါသလား။
2:2019 pm မှာဇန်နဝါရီလ 2, 56
မင်းပြောပြချက်အရ ငါအများဆုံး အကြံပြုထားတဲ့ မော်ဒယ်က ရိုးရှင်းပေမယ့် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်တဲ့ Singer Promise ဟာ ရိုးရှင်းပေမယ့် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်ပြီး မင်းရဲ့သမီးလေးဟာ အပ်ချုပ်လောကမှာ သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို တိုးတက်လာစေမယ့် အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံများရလာသည်နှင့်အမျှ သင်သည် ပိုမိုပြီးပြည့်စုံသော မော်ဒယ်များဆီသို့ ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်၊ သို့သော် အစပိုင်းတွင်၊ ၎င်းသည် သံသယမရှိဘဲ အကြုံးဝင်ဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ယခုလည်း ရောင်းချနေပြီဖြစ်သည်။
22:2019 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 3, 41
ဟယ်လို အပ်ချုပ်စက်အမြဲရှိဖူးတယ်။ဒါပေမယ့် အခုတခြားအရာတွေ ချုပ်ချင်နေပြီး အပ်ချုပ်တဲ့စက်က ကျွန်မကို မတုံ့ပြန်ဘူး။အင်တာနက်မှာ အများကြီးတွေ့ဖူးပေမယ့် မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူး။ အကူအညီလိုနေတယ်။ သံသယဖြစ်မိတယ်။ Brother cx 7o သို့မဟုတ် အဆိုတော် STARLEYT 6699 အကြောင်း။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
အဲဒီနှစ်ခုထဲက ဘယ်ဟာက အမှတ်ပိုကောင်းလဲ။
မတ်လ 1, 2019 တွင် 10:04 pm မှာ
သင်တင်ပြသော မော်ဒယ်များထဲမှ နှစ်ခုလုံးသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နီးပါး ကောင်းသော ရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ Singer စက်သည် ချုပ်ရိုးများ (100 နှင့် 70) ပိုများသောကြောင့် ပိုမိုပြည့်စုံပါသည်။
Brother CX70PE အတွက်၊ ၎င်းသည် ပို၍ Patchwork-oriented မော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် Singer ထက် ယူရို 50 ခန့် စျေးသက်သာသောကြောင့် ဤမော်ဒယ်နှင့် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက၊ ၎င်းသည် အခြားရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
9:2019 pm မှာပြီလ 9, 10
အမေ့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟောင်း alfa နဲ့ refrey နဲ့တွဲချုပ်လေ့ရှိပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီကနေ မြင်ခဲ့ရတဲ့ စက်တွေက အရမ်းနှေးကွေးတဲ့အတွက် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ အပ်ချုပ်စက်ကို ရှာနေပါတယ်။
သာမာန်အပ်ချုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော်လည်း သားရေဆက်ကဲ့သို့သော ထူထဲသောပစ္စည်းများကို ချုပ်လုပ်ရာတွင်လည်း ကြံ့ခိုင်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘတ်ဂျက်သည် ယူရို ၂၀၀-၄၀၀ ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ တံဆိပ်တွေ အများကြီးနဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ အများကြီးရှိလို့ ဘယ်ကနေစရမှန်းမသိဘူး။ အရှိန်အဟုန်၊ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ဘက်စုံစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ကို ရှာဖွေနေကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် မည်ကဲ့သို့ အကြံပြုလိုပါသနည်း။
9:2019 pm မှာပြီလ 10, 47
မင်းပြောပြချက်အရ၊ မင်းရှာဖွေနေတဲ့ Singer Heavy Duty 4432 နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမယ့် မော်ဒယ်တစ်ခုကတော့ ကြံ့ခိုင်တဲ့စက် (သူ့ကိုယ်ထည်က သတ္တုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ စတီးလ်ပြား) ၊ မြန်ဆန်တဲ့ (တစ်မိနစ်လျှင် ချုပ်ရိုး ၁၁၀၀) နဲ့ စွယ်စုံရ၊ (အထည်အမျိုးအစားအားလုံးကို ချုပ်နိုင်ပြီး ချုပ်ရိုးအမျိုးအစား ၃၂ မျိုးပါရှိသည်။
အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ သင့်ဘတ်ဂျက်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။
16:2019 pm မှာပြီလ 9, 55
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ အပ်ချုပ်စက်အသစ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့ စိတ်ဝင်တစားရှိတာကြောင့် ဆွဲဆွဲအားနဲ့ ဖိထားတဲ့ခြေထောက်ရဲ့ နှစ်ဆမြင့်ပါတယ်။ ချည်ထည်နဲ့ စည်းထားတဲ့ နိုင်လွန်တိပ်နဲ့ ချုပ်ရတာထက် ထူထဲတဲ့ နိုင်လွန်နဲ့ ချည် ၂ ပိုင်း ချုပ်ရမဲ့ ဧရိယာ ရှိတယ်။ အခု ကျွန်တော့်အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆွဲအားမရှိတော့ဘူး။ ဘယ်စက်ကို အကြံပေးပါသလဲ။
22:2019 pm မှာပြီလ 11, 20
မင်းရဲ့ လက်ရှိစက်က ဘယ်လောက် အစွမ်းထက်လဲ။ မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီလားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ Singer Heavy Duty ကို ကြည့်ပါ။
25:2019 pm မှာပြီလ 1, 44
ဟယ်လို၊ ကျွန်တော့်မှာ ဒုတိယလက်ဝယ်ထားတဲ့ အဆိုတော် Serenade ရှိပါတယ်၊ အခု ကျွန်တော် ဒီလောကထဲမှာ ပါဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ အထူးသဖြင့် ပိုခိုင်ခံ့တဲ့ အထည်တွေနဲ့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး လုပ်ဖို့အတွက် နောက်ထပ် တစ်ခုခုကို လိုချင်ခဲ့တယ်၊ ဘာကို အကြံပေးရမလဲ၊ အယ်ဖာကို ကြည့်နေတယ်၊ အမှန်အတိုင်း ဒီဇိုင်းကို ကြိုက်ပေမယ့် မင်းရဲ့ အကြံဉာဏ်ကို သိချင်ပါတယ်။
26:2019 pm မှာပြီလ 11, 00
သင်၏ဘတ်ဂျက်ငွေသည် မည်မျှရှိသည်ကိုမသိဘဲ၊ ရွေးချယ်စရာအကွာအဝေးသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး လက်တွေ့အားဖြင့် မည်သည့် ယူရို 150 မော်ဒယ်သည် သင့်လက်ရှိစက်ထက် သာလွန်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် သင့်အား အကြံပြုရန် ခက်ခဲပါသည်။ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး အကောင်းဆုံး အပ်ချုပ်စက်မော်ဒယ်တွေကို ရွေးချယ်ဖို့အတွက် ယူရို 150၊ 200 ဒါမှမဟုတ် €400 သုံးစွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ငါသိထားရမယ်။
မင်းငါတို့ကိုပေးခဲ့တဲ့အချက်အလက်နဲ့ ငါစဉ်းစားနိုင်တာက ဒီပိုခိုင်ခံ့တဲ့အထည်တွေကိုချုပ်ဖို့ Singer Heavy Duty ကို အကြံပေးဖို့ပါပဲ။
2:2019 pm တွင်မေလ 1, 04
သူ့မွေးနေ့အတွက် ကျွန်တော့်ကောင်မလေးကို အပ်ချုပ်စက် ပေးချင်တယ်။ သူမသည် အပ်ချုပ်၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနှင့် အခြားသင်တန်းများကို နှစ်အတော်ကြာအောင် သင်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ဤအပ်ချုပ်စက်လောကအကြောင်း ကျွန်ုပ်မသိပါ။ သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အဝတ်အစားများပြုလုပ်ရန်နှင့် သူမ၏စိတ်ကူးများနှင့် ပုံကြမ်းများကို မြင်သာထင်သာရှိသောအရာအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုရန် လိုအပ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုတွင် များစွာကိုယ်စားမပြုသော ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ အရာတစ်ခုအဖြစ်လည်း လိုလားပါသည်။ ဘယ်စက်ကို အကြံပေးပါသလဲ။
3:2019 pm မှာမေလ 10, 04
သင့်ဘတ်ဂျက်ကို မသိဘဲ၊ အပ်ချုပ်စက်ကို အကြံပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဆင့်တွင်၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် ကိစ္စအများစုတွင် တူညီသောအလင်းရောင်ကို သုံးစွဲလာကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခကောက်ခံမှုတွင် သတိပြုမိရမည့် ကုန်ကျစရိတ်မှာ အလွန်သက်သာသော ကိန်းဂဏန်းဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်တို့သည် လေအေးပေးစက် သို့မဟုတ် မီးဖိုတစ်ခုအကြောင်း ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ)။
သင်သုံးစွဲလိုသည့်အရာ၏ အနားသတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးပါက၊ သင့်အား အနည်းငယ်ပိုကောင်းအောင် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီနိုင်ပါသည်။
15:2019 pm တွင်မေလ 5, 14
သင့်အဖြေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဘတ်ဂျက်ရေးဖို့ မေ့သွားလို့ ယူရို 150 မှ 300 ကြားရှိပါတယ်။
16:2019 pm မှာမေလ 9, 55
ဘယ်အပ်ချုပ်စက် ဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မင်းကို ငါ စာရေးနေတယ် ။
ဖက်ရှင်နှင့် အပ်ချုပ်ပညာ တတ်ကျွမ်းသူ တစ်ဦးအတွက် လက်ဆောင်အဖြစ် လိုချင်သောကြောင့် ချုပ်ရိုးအမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်သည့် မော်ဒယ်တစ်ဦးကို လောင်းချခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် Alfa Pratick9သည် သင်ကမ်းလှမ်းထားသည့် အကောင်းဆုံး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အပ်ချုပ်စာအုပ်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် မျက်နှာဖုံးကိုတောင် ပေးချင်တယ်ဆိုရင် ဘတ်ဂျက်အများကြီးရှိတယ်။
မင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ကို နည်းနည်းထပ်ဆွဲထားရင်၊ မင်းမှာ ချုပ်ရိုးဒီဇိုင်းတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Compakt 500E အီလက်ထရွန်နစ် အပ်ချုပ်စက်နဲ့ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ တခြားလိဂ်မှာ ရှိနေပါတယ်။
18:2019 pm မှာဇွန်လ 11, 07
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်သည် လိုဂို သို့မဟုတ် စာလုံးများကို ပန်းထိုးသည့် အပ်ချုပ်စက်ဝယ်ရန် စိတ်ဝင်စားပါသည်။ ဘယ်မော်ဒယ်လုပ်လဲ ပြောပြပေးပါဦး။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
18:2019 pm မှာဇွန်လ 11, 17
ကျွန်ုပ်တို့၏ အပ်ချုပ်စက်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ကို ထားရစ်ခဲ့သော မက်ဆေ့ချ်အတွက် ကျွန်ုပ်သည် သင့်ထံ စာရေးနေပါသည်။
သင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အကြံပြုချက်အရှိဆုံးအရာမှာ သင် Patchwork အတွက် အပ်ချုပ်စက်ကိုယူပါ၊ ၎င်းတို့သည် အက္ခရာများနှင့် မတူညီသောပုံများကို ချယ်လှယ်သည့်အခါ ရွေးချယ်မှုအများဆုံးပေးသည့်အရာများဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Alfa Zart 01 သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပြီး လမ်းကြမ်းလွန်းသည်။ အဲဒါနဲ့ သင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ 27, 2019 တွင် 11:49 pm မှာ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက် လက်တွေ့ကျသော Alpha9Elna 240 နှင့် Janome 3622 သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်အတွက် အဆင်ပြေသည်ဟု သင်ထင်မြင်နိုင်သော စက်သုံးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အမြင်ကို ကျွန်ုပ်အား ပေးစေလိုပါသည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင်၏ တုံ့ပြန်မှုကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။
10:2019 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 10, 24
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို ငါချစ်တယ်၊ အဲဒါက ငါ့ကို အများကြီး ကူညီပေးတယ်။ ဖြတ်တောက်ခြင်း ၊ စက်ချုပ်ခြင်း နှင့် ပုံစံပြုလုပ်ခြင်း တို့ကို စတင်လေ့လာ ဆည်းပူးလိုသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်အား ကြာရှည်ခံကာ ၀တ်စုံများအတွက် အသုံးဝင်သော စက်ကောင်းကောင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါသည်။ အခြေခံအကျဆုံးမဟုတ်ပါ (ကျွန်ုပ်မလိုအပ်ဘဲ ဈေးအကြီးဆုံးမဟုတ်) ဘယ်ဟာကို အကြံပြုလိုပါသလဲ။
11:2019 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 8, 41
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Alfa Pratik9ကို အကြံပြုထားသည်။ ၎င်းသည် အတွေ့အကြုံမရှိသော အသုံးပြုသူများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးကို အကောင်းဆုံးအသုံးချရန် လိုအပ်သော အသိပညာရှိပြီးသားသူများအတွက် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော မြေပြင်ရှိ အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်သည်။
2:2020 pm မှာစက်တင်ဘာလ 2, 59
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်မှာ အဆိုတော် 4830c ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သိပ်ပြီးတော့ အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး၊ တူညီတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အနည်းငယ်သာလွန်တဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ တူညီတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုက ဘယ်ဟာက လောလောဆယ်မှာလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါကိုလက်ခံ privacy စည်းကမ်းချက်များ *
ဒေတာရည်ရွယ်ချက်- စပမ်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ မှတ်ချက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
ဒေတာဆက်သွယ်မှု- တရားဝင်တာဝန်မှလွဲ၍ ဒေတာကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ ဆက်သွယ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒေတာသိုလှောင်မှု- Occentus Networks (EU) မှ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဒေတာဘေ့စ်
အခွင့်အရေးများ- သင့်အချက်အလက်များကို အချိန်မရွေး ကန့်သတ်၊ ပြန်လည်ရယူပြီး ဖျက်နိုင်ပါသည်။
Prime Day အပ်ချုပ်စက်များ
black Friday အပ်ချုပ်စက်များ
ကျွန်တော်တို့ကို မက်ဆေ့ချ် ရေးပါ။
အပ်ချုပ်စက် 2022 - သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - ကွတ်ကီးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ